You are at:Home»2015»May (Page 5)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-06 07:53:43
Document | Amnesty Internationalwww.amnesty.orgThis briefing isasummary of the Amnesty International report which presents detailed findings and focuses on the Monywa copper mine project and highlights forced evictions, substantial environmental and …
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-05 08:56:55
ရခိုင်တွင် မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ၃ ဦးထပ်မံဖမ်းဆီး
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ဖြင့် အမှုဖွင့် ထိန်းသိမ်းခံထားရသူသည် ယနေ့အထိ လူဦးရေ ၂၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးပါက ၁၅ ရက်အတွင်း ခရိုင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်တော် မြို့နယ်မှူး ရဲမှူး ခင်မောင် က ပြောသည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-05 08:42:44
၁၀း၁၀ တစ်လပြည့်အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု
ဒီမိုကရေစီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသပိတ်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းဖမ်းဆီးခံရသောကျောင်းသားနှင့်ဝန်းရံပြည်သူများလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံကမ်ပိနးနှင့်လက်ဝါးကမ်ပိန်းအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရခြင်းတလပြည့်သည့်ဧပြီလ10ရက်နေ့နံနက်10နာရီ10မိနစ်တွင်တောင်ငူခရိုင်နိုင်ကျဉ်းဟောင်းအဖွဲ့ရုံးနှင့် ဒိုက်ဦးမြို့တို့ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-05 05:30:21
Teachers’ organizations condemnagovernment clampdown on Burma’s student movement and urge Education Law reforms that give universities more independence and resources.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-05 05:23:34
ကျောင်းသူ မပိုပို နှင့် ကိုဝင်းကျော်မှူး တို့အား ယနေ့ (၅-၅-၂၀၁၅) ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်စဉ် . . . . ။============================================သတင်းဓါတ်ပုံ-Ko Thu.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-05 03:14:34
Kyaw Gyi AB
ဒီနေ့မိတ္ထီလာ မြို့ မှာNLD က ခရိုင်ပြန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်မေစီလူမှုအကျိုးဆောင် ကွန်ယက် က တာဝန်ခံ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး နဲ့ 88 ငြိမ်းပွင့် က ဒေါ်မေသက်ဦး တို့ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့တရားစွဲ ပါတယ်တရားလိုမှာ ရဲမှူးကြီး မောင်ရွှေ ဖြစ်ပြီး၃့ ၃့၂၀၁၅ ရက်နေ့ ကအကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများအတွက် ည ၇ နာရီ အချိန် ရေလည် ဘုရားမှာ ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ စွဲဆိုတာပါ၎ ဖွဲ့ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗ က သ ကျောင်းသားကတော့ တရားစွဲရာမှာ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူးသူတို့ ကို အမှုကြီးအမှတ် ၈၇၂/ ၁၅ နဲ့လက်ခံခဲ့ပြီး ၄၄၆ အရ ကိုယ်ပိုင်ခံဝန် ကျပ်သိန်း ၂၀ နဲ့ဒီကနေ့ မှာပဲ လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယရုံးချိန်းကတော့ ၈ ရက်နေ့ဖြစ်ကြောင်းပါ်ှ
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-04 09:54:31
ပုဒ်မ၁၈နဲ့ ထောင်ဒဏ်၎လကျခံနေရသောတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးမြင့်အေးကို ကျောင်းသားသပိတ်အားအကြမ်းမဖက်ရန်တောင်းဆို တကိုယ်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွက် ပုဒ်မ၁၈ဖြင့်ထပ်မံစွဲဆိုထားသည်ကို ယနေ့ ရုံးထုတ်လာစဉ်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-04 04:01:26
မင်းပြားမြို့နယ်မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အပါအ၀င် သုံးဦးကို အစိုးရစစ်တပ်မှဖမ်းဆီး
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်( AA )နှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကြောင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးအပါအ၀င် လူ (၃) ဦး ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
“ ဒီကနေ့ထိ အတည်ပြုနိုင်တာက သုံးဦးပါ။ တစ်ဦးက လဟာကျယ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်၊ နောက်တစ်ဦးက ငစရိုင်းချောင်းကျွန်းက ဆရာ ဦးရွှေလုံးနဲ့ ကျန်တစ်ဦးက မင်းပြားမြို့ပေါ်က အကယ်ဒမီ စီဒီအခွေ အဌားဆိုင်မှ ကောင်လေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မင်းပြားမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာကျော်က ပြောသည်။
မင်းပြားမြို့ပေါ်က အကယ်ဒမီ စီဒီအခွေအဌားဆိုင်မှ ဖမ်းဆီးခံရသူမှာ ကိုမျိုးဝင်းဇော် ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၂၈ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သိရသည်။
“ ကျွန်တော်က လွှတ်တော် အမတ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ဒီလို ကိစ္စတွေကို တစ်စုံတစ်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ဖော် ပြောကြားတာ မရှိတဲ့ အတွက် အသေးစိတ် ပြောဖို့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ မြို့နယ် ရဲမှူးတို့ကို မေးတော့လည်း တပ်က လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြားသိရသလောက် သူတို့ကို ကျောက်တော်မြို့ တပ်မ ၉ ကို ခေါ်ယူသွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်” ဟု ဦးသာကျော်က ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ အဖမ်းအဆီးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး လဟာကျယ် ကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ကိုဝင်းမောင်၏ ဆွေမျိုးတစ်ဦးက ယခုလို ပြောသည်။
“ သူ့ကို မင်းပြားကို သွားတဲ့အခါ မင်းပြားကနေ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ သူအခု ဘယ်ကို ရောက်နေတယ်ဆို ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မသိရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုဝင်းမောင်ရဲ့ ဇနီးနဲ့ ညီမဖြစ်သူတို့က စိုးရိမ်ပြီး လိုက်ရှာဖို့ ထွက်သွားပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးကိုတောင် ယခုကဲ့သို့ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးလို ဖမ်းဆီးသွားသဖြင့် ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် အထူး စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားနေသည်ဟု သူက ပြောဆိုသည်။
မင်းပြားရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက ရခိုင်လို ပြောဆိုသည်။ သူပြောသည်မှာ
“ စစ်တပ်က ဖမ်းတဲ့ နေရာမှာ ရဲကို အသိပေး အကြောင်းကြားတာ မရှိတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်မှာ ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မသိပါဘူး” ဟု ပြောဆိုသည်။
ယခုအခါ မင်းပြားမြို့နယ်မှ သုံးဦး အပါအ၀င် ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ ကိုဇော်ဝင်းမောင်၊ ကိုမောင်သန်းမြင့်တို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားသဖြင့် ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံးတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ လူပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၀ ထက် မနည်းရှိနိုင်သည်ဟု ကျောက်တော်မြို့ လူမှုရေး လူပ်ရှားသူများက ပြောဆိုသည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-04 03:35:07
အလံအမှုနှင့်လုပ်ကြံဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ယောက်ကိုးစိုးလှိုင်(ဗကသ မုံရွာ)ကိုဇင်ကိုသန့်(ဗကသ ရတနာပုံ)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-04 02:38:05
Robert San Aung
သာယာဝတီ ထောင်ဝင်စာအထူးသတင်း တစ်ပုဒ် သာယာဝတီထောင် မှာအရင်တုန်းက နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူများ၊ပြစ်ဒဏ်ချခံရသောသူများကို စနေ၊တနင်္ဂနွေ နေ့တွေမှာထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပေးပါတယ်၊တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသံဇကာ ၂ ခုကို ၆ လက်မ လောက်ဘဲခြားထားလို့ ၊လာတွေ့သူနဲ့ မြင်တွေ့စကားပြောနိုင်ပြီး၊ပစ္စည်းလည်း တခါတည်းယူဆောင်ခွင့်ရပါတယ်၊ တွေ့ချိန်ကလည်းအကျဉ်းထောင်လက်စွဲအပိုဒ် — ၇၈၄ (၅ ) အရ မီနစ် ၂၀ ထက်မကျော်လွန်စေဘဲခွင့်ပြုရပြီးထောင်တာဝန်ခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရအချိန်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းတွေ့ခဲ့ရပါတယယ်။ဒါပေမဲ့ =====ဒီကနေ့ကြားရတာဖြင့် သံဇကာ ၂ ထပ်ကြားမှာ အသံကြားအောင် ဘာအပေါက်မှမပါတဲ့မှန်အမြင့် ခြား ထောင်တပ်ဆင်ထားပြီးစကားပြောတဲ့အခါ ခုံပေါ်မတ်တပ်ရပ်အော်ပြောနေရတယ်၊အင်းစိန်ထောင်မှာလိုတယ်လီဖုန်းလည်းတပ်ဆင်ပေးမထားလို့ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့သူတိုင်း ဒုက္ခကြီးစွာရောက်ရ၊စိတ်ဆင်းရဲရဖြစ်ကြရတယ်၊တွေ့ရချိန်ကလည်း ၁၅ မိနစ်တောင်မပြည့်ဘူးလို့ညီးတွားနေကြပါတယ်နောက်တချက်ကအခြားမှုပြစ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပါရောနေရတော့လူများလို့အော်ရတာနဲ့မလွယ်လှဘဲအပြင်ကလူပြောတာ၊အတွင်းကလူကကောင်းကောင်းမကြားဖြစ်နေရတာဟာထောင်တာဝန်ခံထောင်မှူးကြီးရုံးနဲ့ ၁၅ ပေ လောက်သာကွာတာမို့အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တွေ့ချိန်ကိုလည်းအကျဉ်းထောင်လက်စွဲပါအတိုင်းမိနစ်၂၀ ခွင့်ပြုသင့်ပါကြောင်းမြတ်စေတနာဖြင့် သိစေအပ်ပါသည်။သာယာဝတီထောင်ပြန်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-03 13:11:10
Journalists silenced in Myanmar – free the Unity Five. | Amnesty International
Journalists critical of the authorities in Myanmar pay dearly for their stories. Five journalists at the Unity newspaper paid with their freedom. On World Press Freedom Day we remind the government of their promises to fosterafree press and demand freedom for the ‘Unity Five’.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-03 12:53:41
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့သတင်းမထုတ်ရန် စစ်တပ် သတိပေး – DVB
ဘယ်အဖွဲ့တွေက မတရားအသင်း ကြေညာထားတယ်၊ ဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျသိရရင် သတင်းတွေအပေါ်မှာ အန္တရာယ်ကင်းကင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အခုက နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုတဲ့ အနေအ
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-01 10:35:19
Mobile UploadsHappy birthday to you, my friend
ကိုသန်းနိုင် အတွက် လွမ်းသူ့ပန်းခွေ